Guácima Escondida DLX Igumbi - I-Airbnb
Guácima Escondida DLX Igumbi
Guácima, Provincia de Alajuela, i-Costa Rica
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Bertus
U-Bertus Ungumbungazi ovelele
Ukwakhiwa okusha kukunikeza ukuthi uhlale uxhumene ngokugcwele nemvelo. Igumbi linazo zonke izinkonzo futhi linezakhiwo zesimanje. Futhi, inamashawa amabili: eyodwa yasendlini neyodwa ngaphandle. Ukudla kwasekuseni kufakiwe enanini.
Indawo ekhangayo futhi evulekile kakhulu, enedamu lokubhukuda, indawo yokupaka ilanga, indawo ye-hammock, ne-WIFI kuzo zonke izindawo kanye nengadi yonke yehhotela. Kukhona isikhala esiningi sokuchitha ukuhlala kwakho uyimfihlo kodwa uthola nezikhala ongabelana ngazo nezinye izihambeli.
Ihhotela lisendaweni yasemakhaya kakhulu, eduze kwedolobha "La Guacima de Alajuela", ogwini lomfudlana "Doña Ana". Indawo yasemakhaya, enokuthula nephephile ongahamba ngayo.
Buqamama, kunezinhlobonhlobo zezindawo zokudlela nezitolo ezinkulu ezincane. Isikhungo sedolobha laseGuacima de Aljuela siyikhilomitha elingu-1 futhi ungahamba ngezinyawo. Ku-1.5 km kunesitolo esikhulu sesimanje nesigcwele kahle kakhulu (Automercado).
I love my garden and you will be surrounded by a green environment. Comfortable and natural, those are key words
Thina, uLizbeth noBertus, abanikazi, sihlala endaweni eyodwa kodwa sihlukene nendawo yokulala. Lokhu kunikeza isivakashi ithuba elihle lokuthi kuhlale kukhona umuntu ongasinikeza ukwesekwa noma usizo, uma kunesidingo, kodwa ngesikhathi esifanayo unikeza izihambeli ubumfihlo obuphelele.
Thina, uLizbeth noBertus, abanikazi, sihlala endaweni eyodwa kodwa sihlukene nendawo yokulala. Lokhu kunikeza isivakashi ithuba elihle lokuthi kuhlale kukhona umuntu ongasinikeza u…
UBertus Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Guácima namaphethelo